American Express lafteeda ayaa shaacisay in Apple Pay ay ugu dambeyn ka degi doonto Spain | Waxaan ka socdaa mac
Markii aan wada aaminnay daqiiqadaas Apple Pay Horay ayaa looga mamnuucay Spain sanadkan, si lama filaan ah waxaan ku jiri karnaa maalmo ka hor intaan la bilaabin, tani waa soo bandhigis dhow. Waxaan kuu sheegeynaa tan sababtoo ah codsiyada sida Khariidadaha Apple waxaan horeyba uheli karnaa ganacsiyo gaar ah oo markaan raadineyno macluumaadkooda aan arki karno inay ku dhawaaqaan bulge iyo saxan in Apple Pay la aqbalayo.
Intaa waxaa dheer, tilmaan kale waxaa bixiya websaydhka ah American Express ee Spain waana in aysan timo jarin faafinta weedha "Dhawaan American Express ayaa kuu ogaan doonta Apple Pay adiga".
Markuu wabiga dhawaaqo, waa biyo, bilo badan ka dib markii Tim Cook uu ku dhawaaqay in Apple Pay ay ka soo degi doonto Spain sanadka 2016, kaliya seddex bilood ka dib dhamaadka sanadka iyo ka dib Mashruuc aad u mashquul badan bisha Sebtembar, waxaan mar labaad war u haynaa taasi waxay muujineysaa imaatinka habka lacag bixinta mobilada ee Apple way ka dhowdahay meel fog inuu gaaro Spain.
Sidaan kuu sheegnay, websaydhka American Express ee Isbaanishka waxay si weyn ugu dhawaaqayaan inay si dhakhso leh ugu soo bandhigi doonaan macaamiishooda suurtagalnimada inay ku isticmaalaan Apple Pay aaladooda mobilada ee Apple. Waxaan hubnaa inay u horseedi doonto hay'addii ugu horreysay ee lagu soo qaado Spain, bangiyada intiisa kale iyo bangiyada keydku waxay raaci doonaan gadaal iyagoo xawaare ku socda, iyagoo leh, bilo gudahood badankood kuwaas oo u oggolaanaya isticmaalka Apple Pay ee macaamil ganacsi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » American Express lafteeda ayaa ku dhawaaqday in Apple Pay ay ugu dambeyn ka degi doonto Spain
Wax lagu qoslo inay tirtireen bogga maalmo kadib. Xaqiiqdii waxay ahayd warqad wareejin ah waxayna ahayd inay dib uga noqdaan.